Ijoolleen Kutaa 12ffaa Naannoo Wal Waraansaa Keessa Jiran Irra Deebi’uun Qormaata Akka Fudhatan Ministeerri Barnootaa Beeksise
Ebla 20, 2022
FAAYILII - Waqaqjjira Minsitira Barnootaa Itoophiyaa
Naannoo wal waraansaa keessa taa’anii qormaata kanneen fudhatanii fi qabxii Yuniversitii isaan seensisu kanneen hin arganne barattoonn kutaa 12 barattoota bara 2014 qormaatatti dhiyaatan waliin akka qormaata fudhatan murtaa’ee jira.
Ministeerri barnootaa bulchaawwan waajjiraalee barnootaa naannoo fi magaalaalee waliin ta’uu dhaan har’a ibsa sabaa himaa mootummaaf kenneen, qabxii yuniversitii akka seenaniif kana dura kennameen barattoota Yuniversitii seenaniin ala kanneen naannoo walitti bu’iinsaa keessa jidran barattoonni itti dabalaa akka seenan beeksisee jira.
Dhimma isaa hordofaa kan ture mana maree bakka bu’otaatti koree dhaabbataan kan dhimmootii misooma qabeenya namaa, hojiitti bobbaasuu fi teeknooloojii akkasumas waaltaan ol iyyannoo uummataa dhaggeeffatu tarkaanfii ministerichaatti gammadee jira.
Ministeerrii Barnootaa Har’a Ibsa Kennee Jira
Ministeerri barnootaa ibsa har’a kenneen, qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2013 fi ba’ii isaa ilaalchisee komee dhiyaatan ittiin ka’umsa gochachuu dhaan tarkaanfii fudhate beeksisee jira.
Ba’iin qormaataa naannolee irra jireessaa gad xiqqaachuun mul’achuu isaa fi ministeerri barnootaa filmaata jiru ilaaluun hojjechuu isaa ibsa sana irratti tuqamee jira.
Naannoo wal waraansaa keessa turan kanneen jedhamaniif dhimmi isaanii addatti akka ilaalamu gaaffii kan dhiyeessan naannoo Amaaraa, Affaar, Benishaangul Gumuz fi Oromiyaa ta’uu ministrichi beeksisee jira.
Waggoota walitti aanuu darbeef bulchiinsa qormaata biyyoolessaa waliin rakkoolee wal qabatan ilaalchisee furmaata kennuuf kana booda, qormaanni teeknooloojii dijitaaliin akka kennamu yaalii gochaa kan jiru ta’uu kan ibse manisteerri barnootaa, kun mijachuu baate illee qormaanni akka kana duraa manneen barnootaa naannootti kennamuun hafee waaltaalee federaalaa keessatti kan kanneman ta’uu ibsi sun tuqee jira.
Hoteelonni Finfinnee Keessaa Cufamanii Turan Guutummaan Banamuun Ibsame
Haleellaa Moortaaraa Paarlaamaa Somaaliyaa Irra Ga’eef Gareen Al-Shabab Itti Gaafatama Fudhate
Roobi Itti Dabalaa Tattaaffii Baraarsaa Afriikaan Kibbaaa Danqe
Gargaarsa Gara Tigraayitti Ergamu Ilaalchisee Ibsa Tokkummaa Mootummootaa